धुर्मुस निर्देशित म्युजिक भिडियो ‘कन्ट्रोल हुदैन’ सार्वजनिक « Mazzako Online
धुर्मुस निर्देशित म्युजिक भिडियो ‘कन्ट्रोल हुदैन’ सार्वजनिक
हाँस्यकलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ यतिबेला म्युजिक भिडियो निर्देशनमा पनि निकै ब्यस्त बन्न थालेका छन् । गायक प्रमोद खरेलको ‘हंगामा भो’ एल्बममा समावेश ‘कन्ट्रोल हुदैन’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो उनैले निर्देशन गरेका हुन, जुन भिडियो भखरै सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा धुर्मुसले पोर्चुगलमा बस्दै आएकी मोडेल सालु गौतमलाई फरक अन्दाजमा प्रस्तुत गरेका छन् । सुटिङ्ग गरिएको एक हप्तामै रिलिज गरिएको भिडियोको छायांकन आसपासमा गरिएको हो ।
‘कन्ट्रोल हुदैन’ बोलको गीतको भिडियोमा राम्रो मान्छेलाई देखेपछिको कन्ट्रोल नहुने अवस्थालाई देखाउन खोजिएको छ । के बालक, के युवा, के बृद्व ? सबैलाई राम्रो मान्छेले आकर्षित गर्ने कुरा भिडियोले बोल्दछ । डान्स सहितको कमेडी भिडियोमा हेर्न पाईनेछ ।
भिडियोलाई सुदिप बरालले खिचेका हुन भने सालु गौतम सँगै खेम शर्मा, दिलिप आखेडा, अर्जुन घिमिरे, राज अर्याल लगायतका कलाकारहरुले पनि अभिनय गरेका छन् । यसअघिको ‘हंगामा भो’ बोलको गीतको भिडियोबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएकाले यसपाली कन्ट्रोल हुदैनमा पनि पृथक गर्न खोजिएको गायक प्रमोद बताउछन् । अरु भिडियो हेरिरहेका दर्शकलाई ‘कन्ट्रोल हुदैन’ बोलको भिडियो नयाँ स्वाद हुने गायकको विश्वास रहेको छ ।
दर्शकलाई रमाईलो गराउने आफ्नो अर्को प्रयासको रुपमा धुर्मुसले भिडियो निर्देशनलाई लिएका छन् । अब चलचित्र पनि निर्देशन गर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा धुर्मुले भने “म योजना बनाएर यसो गरौ, उसो गरौ भन्दिन, सिक्दै र गर्दै जाने हो । हेरौ भोलि परिस्थिति बन्यो भने नसकिने भन्ने छैन ।” तर, तत्काललाई फिल्मको निर्देशनतर्फ गईहाल्ने सम्भावना भने न्युन रहेको उनी बताउछन् ।
हाँस्यकलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले निर्देशन गरको म्युजिक भिडियो हेरौं ।